Maxaa ka soo kordhay wada xaajoodka heshiis kordhinta ee Paris Saint-Germain iyo Kylian Mbappé? – Gool FM
(Paris) 26 Feb 2021. Agaasimaha ciyaaraha kooxda Paris Saint-Germain ee Leonardo Araújo ayaa qiray in naadiga reer France ay ku dhow dahay marxalada Kylian Mbappé ay tahay inuu go’aan ka gaaro mustaqbalkiisa.
Kooxda reer France ayaa dooneysa inay qandaraaska u cusbooneysiiso Kylian Mbappé, kaasoo heshiiskiisa uu ku egyahay xagaaga 2022, laakiin xiddiga reer France ayaa ka laba labeynaya inuu ogolaado, maaddaama laga doonayo kooxo dhowr ah oo Yurub ah, oo ay ugu horreeyaan Real Madrid iyo Liverpool.
Haddaba Agaasimaha ciyaaraha kooxda Paris Saint-Germain ee Leonardo Araújo ayaa wareysi uu bixiyay wuxuu kaga hadlay mustaqbalka Mbappé, wuxuuna yiri:
“Waxaan la yaabay qaar ka mid ah wixii laga yiri Kylian Mbappé, weli wuxuu heystaa xilli ciyaareed buuxa ilaa qandaraaskiisa uu dhacayo, booskiisa kooxda ayaa ah waxa ugu muhiimsan, oo markasta wuxuu dhabarka u ritaa mas’uuliyad.”
“Muddo ka hor ayaan wada hadlaynay, waxay aheyd muhiim inaan cadeyno go’aankeena iyo waxa aan dooneyno, waxaan u maleynayaa inaan soo gaarnay xilliga ay tahay inaan go’aan gaarno.”
Intaas kaddib Leonardo Araújo ayaa wuxuu sidoo kale ka hadlay xiddiga reer Brazil ee Neymar Jr, wuxuuna yiri:
“Waxaan sidoo kale la hadalnay isaga, waxaan ku soconaa wadada saxda ah, Qandaraaska wali lama saxiixin, waxaan ku jirnaa waqti wanaagsan, ujeedkuna waa in la saxiixo heshiiska sida ugu dhakhsaha badan.”
Si kastaba ha ahaatee, wararka ayaa waxay tilmaamayaan in ujeedka kooxda Paris Saint-Germain uu yahay in la cusbooneysiiyo heshiisyada xiddigaha Kylian Mbappé iyo Neymar Jr kaddibna lagu xoojiyo kooxda magacyo sar sare, sida Lionel Messi iyo Sergio Ramos, oo qandaraaskooda Barcelona iyo Real Madrid uu dhacayo xagaaga soo aadan.